Nagarik Shukrabar - मेरो बर्बादीको कहानी !
बिहिबार, ०८ माघ २०७७, १० : ३३
बुधबार, २८ फागुन २०७६, १२ : १७ | शुक्रवार
कहाँबाट सुरु गरौँ, म मेरो बर्बादी (प्रेम) को कहानी ? डेढ महिनाअगाडि म उनीसँग प्रेममा थिएँ तर अहिले ब्रेकअप भइसक्यो। हामी जम्मा ६ महिना मात्रै रिलेसनमा बस्यौँ। म निक्कै कुरुप छु अनि कालो पनि ! तापनि उनले नै मलाई प्रेम प्रस्ताव गरिन्। म त यति खुसी भएँ कि संसारकै सुन्दर व्यक्तिजस्तो लाग्न थाल्यो। उनले नै प्रायजसो कल गर्थिन्। उनले नै सुरुमा भेट्न बोलाइन् अनि अन्तिममा धोका पनि उनले नै दिएर गइन्। बस्, म त आफ्नो बर्बादी हेरेर बसिरहेँ।
उनी नै मेरो पहिलो र साँचो प्रेमिका थिइन्। कसैले जीवनमा पहिलो पटक मलाई माया गर्छ भन्ने भान दिलाएकाले म उनलाई निक्कै इज्जत गर्थें। उनीप्रमि मलाई सम्मान थियो। मुटुभरिको माया दिएको थिएँ उनलाई।
कसैले नगर्ने, गर्न नसक्ने माया प्रेम दिएको थिएँ। अथाह मायाप्रेम गर्थें उनलाई र अहिले पनि गर्छु। शायद भविष्यमा पनि गरिरहनेछु। किनभने त्यो भाव उत्पन्न गर्ने नै उनी थिइन् र यो भाग उनैलाई।
खैर, म उनको मायामा चियामा चोबलिएको बिस्कुटजस्तै चुर्लुम्म डुबिसकेको थिएँ। अरु त के कुरा गर्नु र ? यतिसम्म कि म उनीसँग फोनमा बोल्दा दिशा पिसाब आएको पनि थाहा पाउँदिन थिएँ।
म्यासेज हेर्नेबित्तिक्कै मेरो हात, खुट्टा, ओठ, मुख लगायत सबै शरीर काम्न थाल्यो। म त ज्वानो खाएको बोकाजस्तै सल्र्याकसुर्लुक भएँ। यति धेरै माया गर्ने मान्छेले एक्कासि त्यस्तो भन्दा कसको पो मुटु नकाम्ला र ? छोडेर जानु नै थियो भने मलाई किन प्रेम प्रस्ताव गरेको होला भन्ने लागिरह्यो। मैले सोधेँ पनि। जवाफमा उनले भनिन्, ‘यसको जवाफ भोलि बिहान दिन्छु।’
पछि थाहा भयो, उनको माइन्ड उनको दाइले चेन्ज गरिदिएको रहेछ। मायामा धन, सम्पत्ति, स्वास्थ्य केही हेरिँदैन भनेर उनलाई कयौँ पटक भनी सकेँ। उनलाई फेरि मेरो जीवनमा फर्काउन धेरै प्रयास गरिसकेँ। उनीसँग कति मायाको भिख मागेँ, म्यासेज गरेँ, कल गरेँ। मनकामनाबाट आएको मेसेज ५० जनालाई फरवार्ड पनि गरेँ तर मनकामना माईको पनि केही सीप लागेन। आज आएर थाहा भयो– प्रेम बरदान होइन, बर्बादी पो रहेछ ! प्रेम दुई आत्माको संगम भन्थे तर आज बुझ्दैछु, प्रेम आत्माको संगम होइन, सेन्टर फ्रुट चुइगम चैँ रै’छ। चबायो अनि रस सकिएपछि फ्याँकिदियो।
हिजोआज मलाई कलेज पनि जान मन लाग्दैन। सहरबाट टाढा जान मन छ, त्यो पनि कहिले नफर्कने गरी। अझैसम्म मलाई उनको यादले निकै सताउँछ। जब उनको याद आउँछ, भात खानै मन लाग्दैन तर खै किन हो हिजोआज सबैले तँ त मोटाइछस् भन्छन् ?
ब्रेकअप भएको छ महिना भइसक्यो तर पनि मैले ‘मुभअन’ गर्न सकिराकै छैन। यो कन्फेसन मेरो मुटुको टुक्राले पढ्दैछिन् भने म फेरि पनि भन्छु कि, आऊ म तिम्लाई स्वीकार्न तयार छु। म तिम्लाई एकदमै माया गर्छु।
भगवान्ले मलाइ ब्रेकअपको पीडा सहने शक्ति दिऊन् अनि म कसरी मुभ अन हुने भनेर धोका पाएका महान् दुःखी आत्माहरुले सिकाइदिनु प-यो। हेल्प मी !
बिर्तामोड, झापा (पुरुष)